Jobily fisotroan-drononon'ny Mpitandrina RAZAFINIARIVO Fidison Maxime - FJKM Tranovato Ambatonakanga
Jobily fisotroan-drononon’ny Mpitandrina RAZAFINIARIVO Fidison Maxime
Isaorantsika ny Tompo fa noho ny famindram-pony sy ny fahasoavany, dia hiatrika ny Jobily Fisotroan- drononon’ny Mpitandrina Razafiniarivo Fidison Maxime mianakavy isika mpianakavin’ny finoana, eto amin’ny fitandremana Tranovato Ambatonakanga amin’ity Taona 2022 ity.
Maro amintsika no nandray Fahasoavana sy niara-nikely aina tamin’ny asan’ny Tompo, niaraka taminy, teo ambany Fitarihan’ny Fanahy Masina, tao anatin’izay 27 taona nitandremany teto amintsika izay. Ary dia am-pitiavana feno no hanentanana antsika amin’izao taona farany hitandremany eto amintsika izao, hiray fo amam panahy, hifanolo-tanana sy hifarimbona amin’ny fanatontosana izany JOBILY izany – ao anatin’ny firaisankina sy fifaliana tanteraka, ho voninahitr’Andriamanitra Raintsika.
Manainga antsika àry samy hanolotra izay fointsika sy araka ny fanomezam- pahasoavana nomen’ny Tompo antsika avy, ao anatin’lay VILANIN-DRONONO, izay mipetraka eo amin’ny varavarana fidirana atsimo, isaky ny Alahady maraina
Fa hoy ny Soratra Masina ao @ 2 Kor 9 : 7 ; » Aoka ny olona rehetra samy hanao araka izay inian’ny fony avy, tsy @ alahelo, na @ faneriterena ; fa ny mpanome @ fifaliana no tian’Andriamanitra ».
Fa hamaly fitia antsika tokoa ny Tompo !
PS. Ho anareo any am-pielezana, dia afaka mandefa mivantana ny Fandraisanareo anjara amin’ity kaontin’ny Fiangonana ity ianareo
Fivahinianana tao amin’ny Toby Lehibe Soatanana (16 – 18 Oktobra 2021) – SAFIF
Antso famoronana HIRA FANEVA sy SARY FAMANTARANA – KOMITIN’NY FISOTROAN-DRONONO